गुगलमा खोजेका कुरा अरुले पनि थाहा पाउन सक्छन, कसरी हटाउने गुगल सर्च हिष्ट्री ? – Kumbha Khabar
गुगलमा खोजेका कुरा अरुले पनि थाहा पाउन सक्छन, कसरी हटाउने गुगल सर्च हिष्ट्री ?
On २३ असार २०७६, सोमबार १४:३१
कुनै पनि विषयमा केही जानकारी चाहिए हामी त्यसको बारेमा गुगलमा खोज्छौं ।
खोजीको पर्याय नै बनिसकेको छ गुगल । कहिलेकाहीँ हामी गुगलमा यस्तो विषयमा पनि खोजी गर्छौं, जुन अरु कसैले थाहा नपाओस् भन्ने चाहन्छौं । हामीलाई लाग्छ, मेरो मोबाइल वा कम्प्युटरमा गुगल सर्च गरेको कुरा अरुलाई कसरी थाहा हुन्छ र ।
तर होइन, हामीले सर्च गरेको कुरा अरु धेरैले थाहा पाउन सक्छन् । हामीले गुगललाई विश्वास गरेर सोधेका नितान्त व्यक्तिगत कुरा पनि गुगलले देखाइदिन सक्छ। गुगलमा हामीले खोजी गरेका सबै कुराको रेकर्ड रहन्छ।
यो रेकर्ड हाम्रो फोन वा कम्प्युटरमा मात्र रहँदैन, गुगल अकाउन्ट, इमेल अकाउन्ट सबैतिर रहनसक्छ। यो रेकर्ड तबसम्म यी ठाउँबाट हट्दैन, जबसम्म हामीले यसको इतिहास आफ्नो डिभाइसबाट डिलिट गर्दैनौं ।
यदि हामी गुगलमा खोजेका ती कुरा व्यक्तिगत नै रहुन् भन्ने चाहन्छौँ भने आफ्नो डिभाइसबाट सर्च रेकर्ड हटाउनुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले नहटाएसम्म त्यसको रेकर्ड रहिरहन्छ वर्षौंसम्म पनि। आफ्नो गुगल सर्च रेकर्ड सार्वजनिक हुन नदिनका लागि हामीले ‘गुगल सर्च हिष्ट्री’ हटाउनुपर्ने हुन्छ।
कसरी हटाउने गुगल सर्च हिष्ट्री ?
सबैभन्दा पहिला आफ्नो गुगल अकाउन्टमा (google account) जानुहोस्। त्यहाँ my account section मा गएर choose to delete automatically भन्ने विकल्प रोज्नुहोस्।
यो विकल्पले तपाईलाई लोकेसन हिष्ट्रीको एरियामा लैजानेछ। अब यसमा तपाईले कहिलेसम्मको इतिहास मेटाउन चाहनुहुन्छ त्यो विकल्प रोज्नुहोस्। अब ढुक्क हुनुहोस्, तपाईंले गुगलमा के सर्च गर्नुभयो भनेर कसैले थाहा पाउँदैन ।